Logos entanin'ny fironana kanto: Art Deco | Famoronana an-tserasera
Fran Marin | | maro
Andro vitsy lasa izay dia nijery ohatra tsara momba ny logo sy ny endrika izay notsindrian'ny fihetsiky ny zavakanto an'ny Ny Bahuaus Ary anio dia tiako ny manohy ny fironana izay mifamatotra akaiky amin'izany koa, raha ny marina dia toy ny mpirahavavy izy ireo ary manana toetra maro iraisana, na eo aza izany dia misy ihany koa ny tsy fitoviana lehibe eo amin'ireo hetsika roa ireo.
Aorian'izay dia hojerentsika ny hetsika Art deco ary hahita ohatra vitsivitsy namboarina tamin'ny famolavolana logo isika.
1 Avy aiza ny Art Deco ary inona ny mampiavaka azy?
2 Famantarana ny orinasa sy ny famolavolana sary famantarana
Avy aiza ny Art Deco ary inona ny mampiavaka azy?
Ny teny hoe Art Deco dia noforonina tamin'ny faramparan'ny taona 20 ho anarana ho an'ny endriny notapahana geometrika izay nisy heriny lehibe tamin'ny famolavolana nandritra ny taona 1925 ary nalaina avy tamin'ny fampirantiana 'Decorative Arts' tamin'ny XNUMX tany Paris, izay naseho fampisehoana mahavariana ho an'ny lamaody.
Izy io dia niseho tamin'ny zavakanto haingon-trano, ny maritrano, ny endrika sary, ny endrika indostrialy, ny endrika lamaody, ny firavaka ary ny endrika anatiny; na dia koa nefa amin'ny lafiny kely amin'ny kanto kanto (ohatra ny fanaovana hosodoko sy ny sary sokitra).
Amin'ny fisoratana anarana amin'ny vanim-potoana nahaterahan'i La Bahuaus ho toy ny onja, dia mizara ampahany lehibe amin'ny mampiavaka azy izy, manasongadina eo amin'izy ireo ny fironana amin'ny fanaparitahana. Amin'ny tranga Art Deco dia miresaka fisehoan-javatra iray izay tena maro ihany koa isika ary miseho amin'ny lafiny maro, noho izany ny toetrany dia mihatra amin'ny faritra samihafa:
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny ny vanguards voalohany: Fiorenana, kubisme, futurisme, ny sekolin'i La Bahuaus ary ny Expressionism. Ny fitaoman'ny Cubism sy ny Bauhaus, mifangaro amin'ny Suprematism ary ny fitiavam-panahy an'ny Egyptianina, Aztec ary ny asyrianina, izay niteraka fomba iray niavaka tamin'ny karazan-tsakafo na eclecticism.
Toy ny fomba teraka amin'ny taonan'ny masinina, nampiasa ny fanavaozana tamin'izany fotoana izany mba hampidirana azy ireo amin'ny endriny: ny tsipika aerodynamika, vokatry ny fiaramanidina maoderina, jiro herinaratra, radio, fisaronana an-dranomasina ary trano fanaovana pirinty dia ohatra iray izay tsy isalasalana fa nanome aingam-panahy an'ity hetsika kanto ity.
Ireo fitaomana famolavolana ireo dia naseho tamin'ny endrika sombiny, miaraka amin'ny fisian'ny sakana cubika na mahitsizoro sy ny fampiasana ny simetrika ary koa ny tsy fitovizan'ny endriny.
Ny fampiasana typografia dia miavaka amin'ny fampiasana endrika sahy, sans-serif na sans-serif, ary tsipika mahitsy (mifanohitra amin'ny fiolahana maharikoriko sy voajanahary an'ny Art Nouveau).
Amin'ny ambaratonga ankapobeny ny geometry aerodinika, zigzag, maoderina ary haingon-trano, dia teny izay naneho ny faniriana miaraka handika ny vanim-potoana maoderina an'ny milina ary miaraka amin'izay dia hanome fahafaham-po ny filan'ny haingon-trano.
Amin'ny sanganasany dia manandrana misolo tena ny abstraction sasany izy aingam-panahy avy amin'ny natiora izy ireotoy ny taratra taratra mamirapiratra, ranon-drano, na rahona matevina.
Etsy ankilany amin'ny sary sokitra sy ny maritrano ny solontenan'ny biby dia nanisy firesahana mazava ny kalitao sasany toy ny hafainganana ary noho izany dia nampiasa gazette, greyhounds, panther, pigeons na herons izy ireo.
Ho fanampin'izany, a fanamafisana tsy tapaka ny karazana singa fitomorphic rehetra (amin'ny endrika zavamaniry) sy ny voninkazo, cacti na hazo rofia dia ampiasain'ny delineations geometrika.
Na dia mifantoka amin'ny famolavolana logo aza izahay, etsy ambany dia avelako ho anao ny safidinao na ny afisy izay misotro amin'ity fironana ity:
Famantarana ny orinasa sy ny famolavolana sary famantarana
Ny ankehitriny misy antsika dia novolavolaina tany Paris ary ambonin'izany rehetra izany dia miavaka amin'ny hakantom-po tafiditra ao anaty endriny, ny fahaleovantenan'ny loharano ary ny hamafin'ny filalaovany loko. Tsy isalasalana fa ny rafitsary dia mitarika ny dikan'ity sekoly ity, ny fananganana laharam-pahamehana ny habaka ho singa lehibe iray. Mazava ho azy, ny estetika azy dia nipoitra ihany koa tamin'ny sehatry ny famolavolana sary sy ny logo miaraka amin'ireo tetikasa lehibe toa an'i Yves Saint Laurent's, novolavolain'i A. Cassandre. Fanampin'izany ny endriny noforoninao Pivolo solontena tsara amin'ity ony ity izy io. Afaka mahita referansa sy fitaomana mazava amin'ny sanganasa isan-karazany isika, toa ny logo an'ny Meow sy Masinina izay milalao ny famafana tena tanteraka amin'ny endrika fototra sy zavatra ampidirina ao anatin'ny typografia izay hita ao amin'ny sary famantarana tsirairay.
Araka ny ahafahantsika mankasitraka mora foana, dia misy ny fiheverana ny zavatra rehetra mifandray amin'ny haitao, ny maoderina, ny milina ary ny fampandrosoana teknolojia. Ny mekanisma, ny fanaovana tanàn-dehibe ary ny fisian'ny fiarahamonina mpanjifa vaovao no tena manome aingam-panahy ho an'ireo mpamolavola antsika izay lasa teknisiana sy mekanika misy azy manokana. Azontsika atao ny milaza fa ity fomba ity dia mifantoka be indrindra amin'ny eloon ambony ao amin'ny fiarahamonina ary ny rendrarendra no notadiavina isaky ny tolo-kevitra tamin'ny alàlan'ny fampiasana fiolahana miovaova, vehivavy ary kanto. Ny fahamendrehana, ny fihoaram-pefy, ny fitiavan-karena ary ny fahaiza-manao dia teny izay mamaritra tsara an'izao rehetra izao kanto.
Amin'ny maha-fahasamihafana lehibe azy amin'ny La Bahuaus dia hitantsika fa i Art Deco, na dia eo aza ny fahatsapana fahagagana mahatsiravina amin'ny endrika ary ampiasaina ho toy ny fiara hialana amin'ny lamina taloha, dia tsy manandrana manatona na manatevin-daharana ny Functional. Mifanohitra amin'izany no aleony mijanona amin'ny decorum, manao fampisehoana. Tadiavo izany fahatsapana fandinihana izany ary diniho ny hatsarana izay entin'ny vanim-potoana vaovao tamin'ny taona 20. Afaka mahita ireo sisa velona tamin'izany fotoana izany isika amin'ny asa samihafa, ary koa ny maritrano toa ny tranobe Rockefeller Center any New York.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Logos entanin'ny fironana kanto: Art Deco
Boaty afokasoka kely manafina hafatra tsy ampoizina